Woodworking DIY အတွက်ဘုံကိရိယာအချို့ကားအဘယ်နည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Woodworking DIY အတွက်ဘုံကိရိယာအချို့ကားအဘယ်နည်း။
Woodworking DIY အတွက်ဘုံကိရိယာအချို့ကားအဘယ်နည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-30 မူလ:ဆိုက်ကို
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလက်သမား၏အထွေထွေစိတ်ဓာတ်သည် ပို. လူကြိုက်များလာသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော diy wbeginners များအတွက် heodworking tools တွေကိုအကာအကွယ်ကိရိယာများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများ,လက်သမားပါဝါကိရိယာများ, pneumatic tools များ, သေးငယ်တဲ့သစ်သားစက်ယန္တရားငယ်များနှင့်ပြီးအောင်ကိရိယာများ ပန်းချီကားသည်။
Tဒီမှာမကြာခဏဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်လေှျာက်လွှာအန္တရာယ်ရှိသောလျှပ်စစ်စက်ယန္တရားအချို့၏inood အလုပ်ခွင်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလိုအပ်တဲ့အကာအကွယ်အစီအမံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးကိရိယာများသည်အဓိကအားဖြင့်မျက်မှန်တင်ခြင်း, ဖုန်မျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်အသက်ရှူစက်, အကြားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အကာအကွယ်လက်အိတ်များ, သင့်လျော်သောအဝတ်အစားများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
2Cအော်T၏ oolsWdiy diy
လေယာဉ်သည်အခြေခံအကျဆုံးသစ်သားကိရိယာဖြစ်သည်။ ဦး အဆိုအရဝင်ခြင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်သစ်သားဖြင့်သစ်သားအလေ့အကျင့်များကိုတရုတ်လေယာဉ်, ဂျပန်လေယာဉ်, ဥရောပလေယာဉ်စသည်တို့ကိုခွဲခြားထားသည်။
Saw သည်အခြေခံအကျဆုံးသစ်သားကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လက်စွဲစာအုပ်ကိုလက်ကိုလွှဟုခေါ်သည်။ တရုတ်ဘောင်များ, ဂျပန်ဓားမြင်ကွင်းများ, ဥရောပပြန်မြင်ကွင်းများ, ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့များစသည်တို့ကိုတရုတ်ဘောင်များမြင်တွေ့ခြင်းစသည့်မြင်ကွင်းများကဲ့သို့သောရှုခင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ function ကိုနှင့်အသုံးပြုမှုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြသည်။
ပါ0င်သူများသည်လက်များကိုလက်များလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်လေယာဉ်များနှင့်လွှင့်များမြင်ကွင်းများနှင့်မတူပါ။ နှစ်ခုမျိုးရှိပါတယ်အခေြခံဖြစ်သောchisels, လေးလံသောစို့နှင့်ပြားချပ်ချပ်ပြား။ အကြီးအကျယ် chisel သည်အဓိကအားဖြင့်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ပြားချပ်ချပ်စတင်ခြင်းအတွက်အဓိကအားဖြင့် Mortise နှင့် Tennon ပူးတွဲပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
သစ်သားဖိုင်သည်ပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ချွန်ထက်သောလက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအစိတ်အပိုင်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း, ထောင့်များ, ၎င်း၏ပုံသဏ္ as ာန်အရ၎င်းကိုပြားချပ်ချပ်ဖိုင်, ပတ်ပတ်လည်ဖိုင်နှင့်ဖိုင်အပြားဖိုင်များခွဲခြားနိုင်သည်။
သစ်သားသံတူများကိုသစ်သားသံတူများ, သံတူများနှင့်ရော်ဘာသံတူများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ထိုအရာiတစ်ခုချင်းစီရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းတယ်။ သစ်သားသံတူသည်ထွင်းဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စွယ်ဖြစ်သည်. IRon Hammer သည်လက်သည်းများသို့မဟုတ်လေးလံသောထယ်များနှင့်ရာဘာသံတူများကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
အိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းရှေ့ဆက်လှည့်နိုင်သည့်အသုံးအများဆုံးနှင့်လွယ်ကူသော tool ကိုဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်နှင့်rမေှာင်speedဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင့်အောင်လုပ်ed.လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လျှောက်ထားသတ္တုပစ္စည်းများ, သစ်သား, ပလပ်စတစ်စသည်ဖြင့်တူးရန်It ကိုလည်းဝက်အူလှည့အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Curve Saw သည်ပရိဘောဂ DIY ရှိစလင်းပျဉ်ပြားများအတွက်ချွန်ထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောဆွန်းပုံစံများကိုမြင်ရန်ခုံတန်းရှည်နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်သည်။ အချို့သောပိုကြီးတဲ့ပျဉ်ပြားကခါးဆစ်ကိုတွေ့ဖို့အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့သိပ်ပြီးထူထပ်တဲ့ဘုတ်အဖွဲ့လုပ်နိုင်တယ်မမြင်ရနှင့်မျက်နှာပြင်လွှိသာအလုံအလောက်ချောမွေ့မဟုတ်ပါဘူး။
လျှပ်စစ် router ကိုလက်ကိုင်ထွင်းထုစက်ဟုခေါ်သည်။ ထိုအရာ မောင်းsကြိတ်ဆုံစက်၏ကွဲပြားခြားနားသော configuration ကို မော်တာ၏မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့်အတိမ်အနက်ပုံစံနှင့်အခေါင်းပုံစံပုံစံများကိုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ လှျပ်စစ်ဓါတ် router တွင်ပရိုဖိုင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဖျက်ခြင်း, ထို့ကြောင့်၎င်းကိုလူသိများသည်‘Woodworking လျှပ်စစ်ကိရိယာများ’။ အသုံးပြုရန်ခက်ခဲသော်လည်း၎င်းသည်အကြံပြုလိုသည်။
Percussion လေ့ကျင့်ခန်းသည်လှည့်ခြင်းနှင့်သက်ရောက်မှုများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဆင်တူသည်သူတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အစားထိုးလို့မရဘူး တစ်ခုတည်းသောသက်ရောက်မှုသည်အလွန်အနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်းတစ်မိနစ်လျှင်အကြိမ် 40000 ကျော်၏သက်ရောက်မှုအကြိမ်ရေသည်အဆက်မပြတ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်တယ်စာချုပ်သဘာဝကျသံသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်များအတွက် ed,ဘယ်သူလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ကိရိယာအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ။
လက်စွဲစာအုပ်ကိုကြိတ်စက်ကြိတ်ဆုံဆစ်ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖြင့်သဲလုံးအစား DIY ထုတ်လုပ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ ဒါ့အပြင်အိတ်ဆောင်ကြိတ်စက်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာဖုန်စုဆောင်းခြင်းသည်ကြီးမားသောပြ problem နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားပါဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့အခါ။ ဖြည့်စွက်ကာ,Grinder toolထို့အပြင်ပါဝင်သည်လျှပ်စစ် grinder.
Woodworking ကိရိယာများ အစပြုသူများအတွက် Woodworking ကိရိယာများ လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများ လက်သမားပါဝါကိရိယာများ အိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း grinder လေ့ကျင့်ခန်း kit လက်စွဲစာအုပ်ကိုကြိတ်စက် အိတ်ဆောင်ကြိတ်စက် Grinder tool Power Grinder လျှပ်စစ်